Phupha ngesifundo Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Xa uthetha ngento yokuthandana, ihlala isondo, edla ngokuhlala kunye neqabane esele likho. Inokuba yinto eyahlukileyo, njengokuma kobusuku obunye, okanye inokuhlala ixesha elide. Ke ukhokelela kuhlobo lobomi obumbaxa, ekuthi ngamanye amaxesha kungabikho mntu, ngaphandle kwaba babini babandakanyekileyo, wazi nantoni na. Ekhaya ukhokela ubomi obuqhelekileyo bomntu otshatileyo okanye ubudlelwane kwaye kwimizuzu yakho yasimahla uzifumana ngokufihlakeleyo kunye ne-adventure ukuze uphile ngokulangazelela inkanuko yakho yesini.
Umcimbi uhlala ungaqwalaselwa, njengoko kubaluleke kakhulu kuye wonke umntu obandakanyekayo ukuba angakwenzi ukuba kubonakale esidlangalaleni. Nangona kunjalo, kuye kubenzima ukuba ngaba omnye kwaba babini kuphela unobuhlobo obuzinikeleyo kwaye uneqabane, kuba uhlala rhoqo omnye ngokukhawuleza okanye kamva ufuna okungakumbi. Rhoqo emva kweenyanga zokusondelelana, ubuncinci elinye lamaqela lithandana nelinye. Okwangoku, xa iimvakalelo ezinzulu zivela kumcimbi ongazibopheleliyo kwinqanaba lesini, iingxaki zokwenza ukungathembeki azinakuphepheka. Kwimeko yobudlelwane obungaphumeleliyo okanye imitshato, imicimbi enjalo inokuphinda ibe yingxaki phakathi kwesoka langaphambili kunye nentombi yangaphambili, umyeni wangaphambili kunye nomfazi wangaphambili.
Utolikwa njani lo mbandela ngoku kuphando lwamaphupha? Ngaba izenzo zesondo ephupheni zithetha ukuba izinto ezifanayo ziya kwenzeka kwi el mundo ukuvuka? Okokuqala, makhe sijonge iimeko zephupha eziqhelekileyo ezinxulumene nokuzonwabisa ngaphambi kokuba uqhubeke nentsingiselo ngokubanzi yophawu.
1 Uphawu lwephupha «Isihloko» -Amaphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
1.1 Ukuzonwabisa Ngaphandle Kobudlelwane: Ngaba Iphupha lixelwe kwangaphambili?
1.2 Ishishini njengephupha
1.2.1 Osebenza naye ufuna ngaphezulu ... Kutheni le adventure yamaphupha?
1.2.2 Ukudlala ngothando emsebenzini: "ukuthandana nomphathi" njengephupha
1.3 Yiba ne-adventure kunye notitshala kwihlabathi lamaphupha.
1.4 Ukuya! Amava ex-adventure kumaphupha
2 Uphawu lwephupha «umba» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «ukuthandana» - ukutolika kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «ukuthandana» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Isihloko» -Amaphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
Ukuzonwabisa Ngaphandle Kobudlelwane: Ngaba Iphupha lixelwe kwangaphambili?
Iphupha le-adventure libonisa ukuba umhambi ophuphayo ulangazelela ukuhlala ecaleni lakhe lasendle. Ayinamsebenzi ukuba wophula imithetho esebenzayo okanye amasiko; inqanaba lezesondo phantse lihlala lingunobangela wokulangazelela okuvezwe emaphupheni, anokwaneliseka ephupheni ngaphandle koloyiko lweziphumo. Ukuba umntu ophuphayo ngokwakhe uyathandana ngaphandle kobudlelwane, kuya kufuneka amkele icebo ngombulelo kwaye avakalise ngokuphandle iimfuno zakhe kwiqabane lakhe lokwenyani. Ngaphandle koko, unokuluchitha ulwalamano lothando ngenxa yokungoneliseki kwakho.
Osebenza naye ufuna ngaphezulu ... Kutheni le adventure yamaphupha?
Nabani na onolwalamano nomlingane wakhe ephupheni mhlawumbi ufuna ngakumbi ukonyusa ebomini. Ukuze kuvavanywe indima yomnye umqeshwa kule nto, umntu oleleyo kufuneka abuze iimvakalelo zakhe ngalo mntu ngokusondeleyo. Iphupha elo linokuthetha ukuba umntu ophuphayo uyamthemba lo mntu asebenza naye kwaye unqwenela ukuba nobuhlobo obusondeleyo. Imvelaphi engamanyala inokuba sisigqibo kwisimo sephupha: ukuphupha kusenokuba sele kubonwe umdla okanye ukuzama ukudlala ngothando komnye umntu osebenza naye.
Ukudlala ngothando emsebenzini: "ukuthandana nomphathi" njengephupha
Nabani na ongena kubudlelwane bezesondo kunye nomphathi wakhe ephupheni, mhlawumbi ugcina kubomi bobuchwephesha umnqweno wokuxabisa ngakumbi kunye nethuba lokukwazi ukubonisa ubuchule bakhe ngokufanelekileyo. Ngokukodwa, ukuba umcimbi uqaliswa ngumntu ophuphayo, umnqweno wokunyaniseka okukhulu kunye nenxaxheba yobunkokeli inokufumana ukubonakaliswa. Kungenxa yokuba ngokusondelelana usondela kakhulu kwisikhundla sokuphakama. Nangona kunjalo, ukuba umphathi uthathe inyathelo lokuqala lephupha, lo mfanekiso wephupha ungabonisa umsebenzi omninzi okanye izithintelo.
Yiba ne-adventure kunye notitshala kwihlabathi lamaphupha.
Utitshala ephupheni uhlala ebiza ukuze azazi ngcono. Ukuba kukho umcimbi kunye necandelo lezobugcisa, oku kuqinisa umyalezo kwaye kubonise ukuba ukuphupha sele kufumene ukuqonda okuchanekileyo. Uhambo lwe-ego lokufumanisa lubeka umntu oleleyo kwingxwabangxwaba enomdla, nkqu nasemaphupheni, ngokufanayo nento enokwenziwa kukuthandana.
Utitshala angabonisa impazamo ethile ebomini balowo uleleyo. Kuxhomekeke ekubeni ngaba utitshala ophuphayo uhlangabezana nengqeqesho, ukuzithemba okanye ukuthantamisa nokuqonda, kanye kanye la manqaku anokulahleka kulowo kuthethwa ngaye.
Ukuya! Amava ex-adventure kumaphupha
Ukuba awutshatanga ngaphandle koqhakamshelwano ngokwesondo okanye uhlala unyanisekile kwiqabane, imeko efana nephupha lomntu owayethandana naye ifanekisela umnqweno wokophula inkqubo yakho yemihla ngemihla kunye namava (ezesondo).
Uphawu lwephupha «umba» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba umntu uphupha ngokuthandana nokukhohlisa, nangona ekw ubudlelwane obuzinzileyo, ukungathembeki kutoliko jikelele lwephupha kubonisa umnqweno woku utshintsho y ezahlukeneyo. Ukuphupha okunokwenzeka ucinga ngokukhohlisa kwiqabane okanye iqabane, kuba kukho ingxaki kubudlelwane okanye ngakumbi kwinqanaba lezesondo, uthando luye lwadika.
Ukuba umntu uyaqonda ephupheni ukuba uthandana nabani, kwelinye icala kunokuba yinto ebonisa ukuba unomdla kulo mntu kubomi bokwenyani kwaye uyamfumana enomtsalane ngokwesondo. Kwelinye icala, umntu unokumela kuphela umntu ongaziwayo.
Ukwazi ukunyamezela umcimbi, uthembisa ngokophando lwabaphengululi Suerte y Impumelelo. Nangona kunjalo, ukuba uyazonwabisa, kufuneka ulindele ukulahleka kwegama.
Ukuzibona udlala nomntu othile kuhlala kubonisa umbono olungileyo walowo uphuphayo ngaye. Njengasimahla kwaye engalawulekiyo njengoko umntu anokuyifumana ephupheni, umntu angathanda ukuba kubomi bokwenyani. Nangona kunjalo, izizathu zokuba kutheni umntu engenakuyenza le nto inokuba ngumbuzo ekufuneka umphuphile azibuze wona kube kanye.
Uphawu lwephupha «ukuthandana» - ukutolika kwengqondo
Ukusuka kwindawo yokujonga kwengqondo, "i-adventure" ihlala isemva kwephupha. Amathandabuzo. Kwi-adventure yokuphupha, i-subconscious ihlala ngaphandle kokuthintelwa kwaye ihlazisa yonke into umntu angenakuze abe nesibindi okanye ukuzithemba ukuyenza ekuvukeni ubomi: ukukrexeza, isondo eshushu ngaphandle kwethabo nomthandi.
Kuba amava ezesondo ahlala ngaphambili kumcimbi wokuthandana, ukhetho kunye nokukhetha kuhlala kubonakala kwinqanaba lephupha kunye nalo mfanekiso uphuphayo. utyekelo lwesondoUmntu angathanda ukuhlala kwaye azame, umzekelo, "amandla amathathu" okanye isini esibuhlungu. Nangona kunjalo, kuhlalutyo lwamaphupha, oku akuthethi ukuba ufuna ukwenza oku nomnye umntu ongelilo iqabane lakho.
Kule meko, umcimbi ungabonisa ukuba wena uneentloni kakhulu okanye uthintelwe ukuba uthethe neqabane lakho malunga nale minqweno kunye nemibono, njengoko unokukholelwa ukuba awunakukutyhilela oku.
Kwabo baphuphayo, eli phupha linokuba kukutyhala kwicala lokuvuleka kubudlelwane bothando kwaye mhlawumbi elinye liyavuya kakhulu kunokuba umntu esoyika.
Uphawu lwephupha «ukuthandana» - ukutolika kokomoya
Ngengqiqo yokomoya yokuchazwa kwephupha, umfanekiso wephupha "umcimbi" uthetha izichasi ebomini, ngokomgaqo wobudoda nobufazi kwaye ke ngoko search iyunithi.